कसरी हटाउने अनुहारको कालो पोतो ? – Aaj ko Sandesh
मुख्य पृष्ठ /News/कसरी हटाउने अनुहारको कालो पोतो ?
छाला कालो, खस्रो हुनु विभिन्न किसिमका फोका, दाग, घाउ आउनुलाई छालाको समस्या वा रो’ग भनिन्छ । छालाको रंग चम्किलो खालको हुन्छ। स्वस्थ छाला र अस्वस्थ छाला राम्ररी चिन्न सकिन्छ ।
महिलामा छालाको विषेश महत्व हुन्छ । छालाले सुन्दरताले अत्यन्त महत्व राख्दछ । छालाको स्वस्थताले नै सुन्दरताको विशेषता झल्काउँछ । सुन्दर र स्वस्थ छाला भयो भने सुन्दरतामा अत्यन्त चमक आउँछ । छालाले साथ दियो भने सुन्दरताको लागि सुनमा सुगन्ध हुन्छ । छालाको सुन्दरता जोगाई राख्न केही हो’सियारी अपनाउनु पर्दछ ।
छालामा लाग्ने हुने विभिन्न स’मस्या र रोगका बारेमा जानकारी राख्न सके यसले हामीलाई सुन्दर र स्वस्थ बनाउँछ । स्वस्थ छालाले मानिसलाई सफलतामा पुर्याउँछ । सुन्दरता नचाहने कोही पनि हुँदैंन । छालाको सुन्दरतासँगै मनको सुन्दरता पनि आवश्यकता हुन्छ । मनको सुन्दरताले छालालाई सुन्दर बनाउँछ र स्वस्थता प्रदान गर्दछ ।
– इण्डोक्राइन रो’ग वा कुनै किसिमको हार्मोनल रो’गहरु जस्तै थाइराइड, सुगर, पाठेघरको समस्या, पेट तथा मिर्गौलाका स’मस्या भएमा छालाका रो’ग देखिन सक्छन् । समयमा उपचार नभएमा छालाका कोषमा गडबडी आई छालाका रो’ग तथा कालोपोतो आउन सक्छ ।
– कहिलेकाही छालामा सं’क्रमण हुँदा छालाका कोषमा आउने गडबडीले मेलानिन उत्पादन बढी भई छालामा असर देखिन्छ । यस्तो अवस्थामा समयमा उपचार गराउनुपर्छ ।
कालोपोतो उपचार पछि कतिपयलाई आइरहने भएकाले उच्च किसिमको उपचार तथा सल्लाह आवश्यक पर्दछ । उपचारका क्रममा विभिन्न किसिमका छाला चम्काउने वा कालो भएका भा’गलाई छोप्ने क्रिम पाइन्छन् । कालोपोतो फाल्ने भनेर बनाएका औषधि पनि पाइन्छन् ।